Chuma Asuke महोत्सव - गुड़िया महोत्सव - हिना मत्सुरी - जापान च्यानल गाइड
मंगलबार, मार्च २, २०२१
गुडिया फेस्टिवल, हिना मत्सुरी ( り 祭 り) वा "केटीहरूको दिन"एक विशिष्ट जापानी पार्टी हो, जुन मार्च 3rd मा लिन्छ। चरणमा रातो कपडाको साथ प्लेटफर्महरू पुतलीहरूलाई पर्दाफाश गर्न व्यवस्थित छन्। एडो अवधिमा पुतलीहरू देखाउने चलन शुरु भएको थियो। जापानी मान्यता अनुसार, मानिसहरू विश्वास गर्थे कि पुतलीले दुष्टात्मा, रोग, दुर्भाग्य, दुर्भाग्यलाई रोक्ने शक्ति छ र यसैले मालिकको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले जापानीहरूको लागि, हिना केवल सजावटी वस्तुहरू भन्दा बढी हो।
को एक विशाल संग्रह हिना डॉलहरू भर प्रदर्शित Asuke छिमेकी em टोयोटा, यसको बासिन्दाहरूको सामूहिक प्रयासको लागि धन्यवाद। सयौं पहिलेको उपस्थिति कायम राख्नको लागि सडकमा टहलनुहोस्, र पहिलो हातले परम्परागत उत्सवको अनुभव गर्नुहोस् जुन लगभग सबै जापानी महिलाको बाल्यकालका सम्झनाहरूमा धेरै छापिएको छ!
१ 1998 1999 In मा, नागरिकहरूले पर्यटनलाई बढावा दिन एक विचार सुझाव दिए। "कसरी हामी सबैले हाम्रो हिना पुतलीहरू देखाउँदछौं र सबैलाई देख्नका लागि सडकमा देखिने बनाउँदछौं?" अवधारणा एक सफल साबित भयो। अब, प्रत्येक वर्ष, यस शहरले १ 6.000 XNUMX। देखि यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, जिज्ञासु पर्यटकहरूलाई घर र पसलहरूको बरामदमा राखिएको लगभग ,XNUMX,००० गुडियामा जासुसी गर्न अनुमति दिईन्छ, हिना पुतलीको सबैभन्दा प्रभावशाली संग्रह मध्ये एक।
आसुके छिमेकीमा तपाईले नयाँ र पुरानो पुतलीहरू देख्न सक्नुहुनेछ, ईडो पीरियडबाट केहि असाधारण दुर्लभहरू, जुन १ 150० भन्दा बढी वर्ष पहिले भएको थियो। तर, किमोनो कपडाबाट बनेका पुतलीहरू बाहेक, त्यहाँ माटाले बनेका र हातले चित्रित गरेका छन्, जुन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुहरू पनि हुन्। बिभिन्न सामग्रीबाट बनेका अन्य विशेष सेटहरू पनि प्रदर्शन गरिने छन्।
आज, हिना मत्सुरीको प्रतीक पुतलीलाई पारिवारिक विरासत मानिन्छ, बहुमूल्य टुक्राहरू सावधानीपूर्वक प्याकेज गरिएको छ र त्यो चाड अवधिसम्म राखिएको छ। कार्यक्रमको बखत, तिनीहरू शाही अदालतको पोशाकमा लुगा लगाईएका विभिन्न तह (हिना डान) श्रेणीगत क्रममा बेदीमा राखिएका हुन्छन्। प्लेटफर्ममा पुतली र फ्लोरहरूको संख्या फरक हुन्छ, तर सामान्यतया १ 15 पुतलीहरू पाँच वा सात फ्लोरहरूमा मिलाइन्छन्। "हिना डान" सँधै रातो कार्पेटले ढाकिएको हुन्छ "डन्काके" वा हाई-मोसेन भनिन्छ। पूर्ण खेल डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किन्न सकिन्छ तर 350 XNUMX,००० येन भन्दा बढी लाग्न सक्छ। यसैले, हिना मत्सुरीको लागि खेल एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, यो एक परिवार सम्पत्ति मानिन्छ।
पुतलीको व्यवस्था पदानुक्रमको अनुसरण गर्दछ।
पहिलो र उच्च स्तर "Dairisama" (इम्पीरियल प्यालेस) को लागी हो, त्यसैले यो स्तर सम्राट र महारानीको लागि सुरक्षित छ। महारानीको पोशाकलाई "jūnihitoe" भनिन्छ (हेयान कालदेखि बाह्र-तह समारोह समारोह)। आज पनि किमोनो "jūnihitoe" शाही परिवारको विवाह समारोहमा प्रयोग गरिन्छ। "शाही जोडी" जहिले पनि उच्च पद र सम्राट सधैं सम्राज्ञीको बाँया कब्जा गर्न पर्छ।
अदालतका तीन महिला, कुलीन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै
पाँच संगीतकारहरू, कलाकार र लेखकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै
२ मन्त्री र प्रस्ताव, सरकारी अधिकारी र धार्मिक प्रतिनिधित्व
S समुराई र बोटहरू, योद्धा वर्ग र सामन्त डोमेनहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ
अदालतमा प्रयोग गरिएका वस्तुहरू - फर्निचरको लाख चित्रहरू, किमोनोसको लागि छाती, ड्रेसिंग टेबल, चिया समारोहका लागि भाँडा, सिलाई बक्स।
अदालतको बाहिर प्रयोग गरिने वस्तुहरू, साधारण व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै - गोरुको गाढा, पालकीम, स्ट्याकेबल बक्सहरू, फूलहरूको कार्ट
त्यसकारण जापानी हिना पुत्रा युवा पर्यटकका लागि अलि गाह्रो छr
किन पुतलीको प्रदर्शन सामान्यतया घटनाको मिति भन्दा दुई हप्ता अघि रहन्छ, र चाड समाप्त भए पछि फेरि भण्डार गरिनेछ। यो एक पुरानो अन्धविश्वासको कारण हो, यो विश्वास गरिन्छ कि परिवारहरू जसले आफ्ना पुतलीहरू भण्डार गर्न समय लिन्छन्, उनीहरूलाई छोरीहरू विवाह गर्न गाह्रो हुन्छ। अन्य कारकहरूले यसको विरलता बढाउँछन्, पुरूष वंश भएका परिवारहरूमा पुतलीहरूसँग पुतलीहरू हुँदैनन् र छोरीहरू विवाह गरेपछि उनीहरू तुरुन्तै मुक्ति पाउँछन्, अब तिनीहरू प्रदर्शन हुँदैनन्। यी कारणहरूले गर्दा, जापान भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरू दुलहीहरू विरलै हेर्न सक्छन्, विभिन्न सेटहरू एक्लै छोड्नुहोस्।
तथ्याङ्क: लगभग फेब्रुअरी १ ​​15 देखि मार्च १th सम्म (वर्ष अनुसार) नि: शुल्क।
समय: १०: ०० देखि १:10:०० सम्म (प्रत्येक स्टोरको लागि भिन्न हुन्छ)
आइची, टोयोटा, आसुके-चो, कुरानोमे १ 16